श्री एअरलाइन्सको जहाजमा आकाशमा उड्दा उड्दै चिरा परेर भ्वाङ्ग परेपछि…. हेर्नुहोस भिडियोमा – NepalajaMedia
March 8, 2021 432
जन आस्थाका अनुसार गए राती भैरहवा विमानस्थलका एटीसी किशोर आचार्यले बिहान २ बजेर ३ मिनेटको समयमा सामाजिक सञ्जालमा ‘यो समयमा पनि हामी फ्रेस छौं, ड्युटीमा छौं’ भनेर फोटोसहित लेखेपछि सर्वत्र चासो देखिएको थियो । कतिपयले भैरहवामा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान भएको समेत लख काटेका थिए । तर,उनै आचार्यले भने ‘त्यसो होइन,भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन अझै केही महिना लाग्छ ।’
गए रातीको उडान श्री एअरलाइन्सको मेडिकल रेस्क्यु फ्लाइट थियो । पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको आफन्त बिरामी भएपछि उक्त उडान भएको हो । बेलुकातिर सेनाको जहाजले या श्रीको विमानले चार्टर उडान गर्ने भन्ने छलफल चलेपनि साँझसम्म निर्क्यौल भएको थिएन । काठमाडौंबाट विमानस्थल खोल्न कुनै निर्देशन नआएकोले नियमित उडान सकिएपछि बिराटनगर विमानस्थल बन्द गरिएको थियो । तर राती १० बजेतिर काठमाडौंले खबर गरेपछि झटपट खोलियो ।
राती १ बजे बिराटनगरबाट बिरामी लिएर काठमाडौंको लागि विमान उडे पनि काठमाडौंमा ल्याण्ड नगरुञ्जेल भैरहवा विमानस्थल पनि खुल्ला थियो ।
बिरामी भने भीआईपी दुगडका आफन्त थिए । दुगड आफैँले फोन घुमाएपछि मोरङका सिडियो र सुरक्षा निकायका प्रमुखले समेत रातको उडानबारे विशेष चासो राख्दै बिराटनगर विमानस्थलमा पटक पटक सम्पर्क राखेका थिए ।
यसैबीच गए राती सिकिस्त बिरामीको उद्धारमा प्रयोग गरिएको श्री एअरलाइन्सको विमान आफैं बिरामी रहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । रातको समय उद्धारमा उडेको उक्त विमानको आपतकालीनद्वार नजिकै खतराको संकेत हुने गरी भूकम्पमा घरको भित्तो चिरिएझैँ चिरिएको देखिएपछि सवैले आश्चर्य मान्दै जीब्रो टोकेका छन् ।
flight or micro 🤣🤣
♬ original sound – bishesh sigdel
Prevअभिषेक बिना बाच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी करिश्मा किन बनिनन् बच्चन परिवारको बुहारी ?
Nextआज पनि बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति पुग्यो तोलाको ?